Mr. Kipligat aya hor istaagay shir ay yeelan lahaayeen xubana ka tirsan dawladda FKMG
Buluugleey, April 23, 2005
Mr. Kipligat, wakiilka dowladda Kenya u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa hor istaagay kulan ay yeelan lahaayeen qaar ka tirsan xildibaanada Dawladda FKMG ee ku sugan magaalada Nairobi.
Shirkan oo ka dhacay aqal ku yaal dhismayaasha Sagret ee magaalada Nayoobi oo ay kireysteen xildhibaanndan ayaa la sheegay in uu Mr. Kibligat
ku tilaamayay khilaafka soo kala dhexgalay xubnaha madaxa dawladda FKMG inay nasiibdarro tahay.
Waxa Mr. Kibligaati uu u sheegay xildhibaanadii shirkaaska u k asoo qeybgalay in ay isaga qadariyaan oo ay shirkooda dib u dhigtaan.
Khilaafka ugu weyn ee xubanaha madaxa dawladda FKMG soo kala dhaxgalay waxaa ugu weyn mudane Sharrif Xasan guddoomihay balamaanka uu aaminsan in la dhowro dastuurka dwladda FKMG iyo isagoo ansixiyay mooshin looga soo horjeeday ciidamada safka hore inay dalka yimaadaan. Aqlabiyadda barlamaanka oo caddeeyay in madaxbanaanida Soomaalia ay muqaddas tahay. Fikradaasina waxaa jecleysan madaxweynaha iyo xubno ka tirsan dawladda FKMG.
Horey ayuu Guddomiyaha barlamaanka u cadeeyay maqwqifkiisa ku aadan wuxuuna hoos ka xariiqay “waxay igu noqotay wax lama filayn ah in 100 mudane ay amar ku siiyaan in uu 24 saac golaha baarlamaanka isugu yeero”
Sida dastuurka dhigaya waxay xubnaha barlamaanka horkeeni karaan mooshin, laakin ay xeer dumis ah in gudoomiyaha baarlamaanka loo qabto 24 saacaddo in uu shir isugu yeero golaha baarlamaanka yuu yiri nin ka mid ah mudanayaasha barlamaan dawladda KMG.